राजकुमारीको अनिर्णयले दिएको अन्त्य निशु ढकालको ‘निशानी’ यस्तो! (भिडियोमै हेर्नुस्) – KhabarTime
राजकुमारीको अनिर्णयले दिएको अन्त्य निशु ढकालको ‘निशानी’ यस्तो! (भिडियोमै हेर्नुस्)
काठमाडौँ । गायिका निशु ढकालको नयाँ गजल निशानीको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । निशुको स्वर रहेको गजलमा शब्द शृजना रामचन्द्र तिमल्सिनाको रहेको छ । जसमा नबिन कुमार तिमल्सिनाको रहेको गजलमा एरेन्ज पनि नबिनकै रहेको छ ।
प्रेम कथामा आधारित गजलमा एउटा राज्यकी राजकुमारीले आफ्नो राजकुमारसँगको विबाह अस्विकार गर्छिन् । कारण हो सेनापतिसँगको प्रेम सम्बनध । साँचो प्रेममा ठूलो, सानो, जात, धर्म हेरिँदैन भन्ने विषयलाई दरबार भित्रको हाइप्रोफाइल कथा मार्फत निर्देशक नबिनले कलात्मक शैलीमा कथालाई फिल्मी पाराले बुन्न सफल देखिन्छन् ।
जसमा पछिल्लो समयकी लोकप्रिय मोडल गीता ढुंगाना, पत्थरको मुटुको उपनामले परिचित मोडल बिजय पुन, किशोर गौतम, रामबाबु रेग्मी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । ज्ञानेन्द्र हुमागाईको छायांकन रहेको गजलमा निर्देशक नबिन स्वयमको सम्पादन रहेको छ ।
नेटिभ म्यूजिक नेपालबाट बजारमा ल्याइएको गजलले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको गायिका निशु ढकालले हामीसँगको कुराकानीका क्रममा बताउनु भएकि थिइन् ।
गणेशमान सिंहको छत्र छायाँमा राजनीति गरेका, कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन